Lagu daabacay daraasad cusub oo ku saabsan cudurada wadnaha bukaanka qaba Apple Watch | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii la sii daayay Apple Watch hadda lix sanoHoreyba waxaa ujiray koox muhiim ah oo dad ah, oo aan kamid ahay, oo si sharaf leh usheegi karno inaan noolahay mahadsanid xaqiiqda ah inaan xirnaa saacada Apple ee curcurka xili xasaasi ah nolosheena.
Xiriirka joogtada ah ee aaladaha Apple ay la leeyihiin daawada waa la wada ogyahay, iyagoo hubinaya nooc kasta oo cusub, inay in yar inaga caawinayaan inaan ku raaxeysano caafimaad wanaagsan. Hadda daraasad caafimaad oo cusub oo wadnaha ah ayaa hadda la daabacay taas oo ah Apple Watch.
Subax subax ah bishii Abriil, Apple Watchkeygu wuxuu igu toosiyay iyadoo gariirkeedu igu baraarujinayo heerka wadnaha oo hooseeya. Lagu calaamadeeyay 25 garaac daqiiqadii. Saddex saacadood ka dib waxay awoodeen inay ka soo kabtaan astaamahaygii muhiimka ahaa ee ICU-da cusbitaalka. Maalintii ku xigtay, waxaa la igu sameeyay qalliin wadnaha ah waxaana aana la ii saaray qalab wadnaha ka hawl gala si mid kale oo "hooseysa" oo la mid ah tii aan subaxaas lahaa dib u dhicin. Waxaa ku keydsaday gambaleelka… Apple Watch-kayga.
Sheekadana kuma dhicin nin ka yimid Massachusetts ama haweeney reer Ohio ah, sida aan badanaa aqrisan jirnay waqti ka waqti, laakiin waxay ku dhacday Server ah. Marar badan ayaan ka fikiray maxaa dhici lahaa haddii aanan caado ka dhiganin inaan la seexdo taleefankayga Apple Watch. Waxaan u maleynayaa inaanan kicin hada.
Taasi waa sababta aan had iyo jeer fiiro gaar ah u siiyo wararka la xiriira Apple Watch iyo waxtarka ay u leedahay caafimaadka dadka. Daraasad cusub oo ay Isbitaalka Stanford ayaa lagu daabacay QAADO Isbuucaan.
1 110 bukaan ayaa kormeeray
2 Xog la yaab leh oo la helay
110 bukaan ayaa kormeeray
Astaamaha dadweynaha ee bukaanada la bartay.
Daraasadani waxay isticmaashay Bukaanka 110 dhibaatooyinka wadnaha oo dhammaantood laga kormeeray guryahooda Apple Watch iyo iphone iyo codsi gaar ah oo loogu talagalay.
Xogta isla isla waxay soo jeedineysaa in aaladahaan la adeegsaday loo isticmaali karo in lagula socdo dhaqdhaqaaqa jilicsan ee bukaanka wadnaha oo leh saxnaan la yaab leh. Baadhitaanno isku mid ah ayaa la sameeyey intii lagu jiray booqashooyinka rugta si loo helo aasaas lagu barbardhigo xogta ay ka heleen aaladaha Apple guriga.
Daraasadda, xogta laga helay baaritaanka socodka ee 6-daqiiqo ah (6MWT) ayaa la qiimeeyay, iyo sidoo kale xog uruurinta si isdaba-joog ah loo soo aruuriyay si loo buuxiyo ama xitaa loo beddelo imtixaanka. 6MWT isbitaalka bukaanka qaba cudurada wadnaha.
Isbarbardhiga akhrinta ay qaadatay Apple Watch iyo tijaabooyinka ku saabsan rugta caafimaadka, Daraasadu waxay awood u yeelatay inay ogaato in Apple wearable loo isticmaali karo si loogu kalsoonaado cabirka awooda shaqeynta bukaanka.
Xog la yaab leh oo la helay
Sida lagu sheegay daraasadda, Apple Watch si sax ah u qiimeyn karo awoodda waxqabadka ee bukaanka oo leh 90% xasaasi ah iyo 85% kalsooni.
Iyada oo lagu jiro bey'ad kormeer ah, IPhone iyo Apple Watch oo ay weheliso barnaamijka VascTrac waxay awood u yeesheen inay si sax ah u qiimeeyaan qofka 'daciifnimadiisa' iyadoo loo nuglaado xasaasiyad dhan 90% iyo gaar ahaanta 85%. Isbitaalka ka baxsan goob aan ilaalin laga haynin, xogta laga helay 6MWT waxay ahayd 83% lagu kalsoonaan karo.
Macluumaadka xaddidan ee laga soo ururiyey guriga bukaanka waxay ku dhowdahay sida saxda ah ee saadaalinta awoodda waxqabadka sida xogta laga helay baaritaanka 6MWT ee lagu sameeyay rugta caafimaadka, oo leh aag ka hooseeya qalooca (AUC) ee 0,643 iyo 0,704, siday u kala horreeyaan.
Daraasadu waxay aakhirkii soo gabagabeysay in isku darka Apple Watch iyo iPhone si fiican loo isticmaali karo si looga cabbiro xogta wadnaha meel fog iyadoo aan loo baahnayn booqashooyin joogto ah isbitaalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » La daabacay daraasad cusub oo ku saabsan cudurada wadnaha oo lagu sameeyay bukaanka qaba Apple Watch